Nyocha Teclast X10 3G, 3G Tablet for less than 100 Euro | Gam akporosis
You nwere ike inwe ezigbo Mbadamba gam akporo maka ihe na-erughị 100 euro? Azịza nye ajụjụ a nke ọtụtụ n'ime gị ga-ajụrịrị onwe gị oge ụfọdụ, mgbe ị nwesịrị nnukwu nsọpụrụ nke ịnwale ịnwale Gam akporo Tablet Teclast X10 3G, O doro anya na ọ na-ada ụda EE.
Ọzọ, m na-akpọ gị òkù zuru ezu nyocha na nyocha nke Teclast X10 3G. Nyocha zuru oke mgbe ị nyochachara nke a nnukwu mbadamba ụrọ na ihe na-erughị 100 euro anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya na nkọwapụta teknụzụ dịka ihe na-atọ ụtọ dịka ezigbo nhazi asatọ nwere ezi uche nke Mediatek bịanyere aka, ezigbo na karịa zuru ezu na mkpebi HD, na batrị dị egwu 5800 mAh, nke na ọnọdụ njikere nọrọ m ruo ụbọchị anọ na njikere na-enweghị gbanyụọ ya n'oge ọ bụla yana yana njikọta niile enyere n'oge niile.
1 Nka na ụzụ nkọwa nke Teclast X10 3G
2 Ihe kacha mma nke Teclast X10 3G Tablet
3 Ihe kacha njọ nke Teclast X10 3G
Nka na ụzụ nkọwa nke Teclast X10 3G
Nlereanya X10 3G
Ihuenyo 10.1 "IPS LCD 1280 x 800 pikselụ mkpebi na ngwa 213.
Nhazi Mediatek MT8392 32 bits na isi asatọ na 1.4 Ghz
GPU Maịl t450
Nchekwa n'ime 16 Gb gbasaa site na MicroSD ruo 128 GB
Igwefoto na-aga n'ihu 2 mpx
Igwe n'ihu 0.2 mpx
Njikọ 3G: 850/1800/2100 Mhm bands-WiFi - Bluetooth 4.0 - GPS na aGPS - USB OTG -
Atụmatụ ndị ọzọ Ngwa etinyere na sistemụ iji chịkwaa ngwa ndị ejiri ikike iji malite sistemụ yana ngwa nke ya iji nweta mmelite site na OTA ma ọ bụ mmelite aka.
Batrị 5800 mAh lithium polima
Akụkụ 260 x 163 x 9.6 mmm
Ibu ibu 567 grams
Ahịa 95.92 euro na ego 36%
Ihe kacha mma nke Teclast X10 3G Tablet
Obi abụọ adịghị ya nke kacha mma nke Teclast X10 3G Tablet, bụ na ihe na-erughị 100 euro anyị ga-enwe ezigbo Android Tablet na ọbụlagodi na-enye anyị 3G Njikọta enwe ike ijikọ ebe ọ bụla anyị hụrụ onwe anyị na ntinye dị mfe nke kaadị MicrSIM anyị. Ọ bụrụ na nke a, anyị gbakwunye ihuenyo na-akpali akpali na IPS LCD panel nke 1280 x 800 pikselụ, ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, mkpebi HD na eziokwu karịrị oke iji rụọ ọrụ ma ọ bụ nwee obi ụtọ na Mbadamba ụrọ, anyị na-eche ezigbo ihu ọnụ kwesịrị ekwesị maka ọrụ maka oge ezumike na, ọkachasị gbadoro anya na onye ọrụ ntinye gam akporo Ihe ị na-achọ bụ ịnwe ọnụ na nnukwu ihuenyo iji jiri kọmputa nke abụọ, yana karịa ihe niile ị ga-eri ọtụtụ ọdịnaya dị ka ihe nkiri na vidiyo ma ọ bụ gaa na ịkpọtụrụ netwọkụ mmekọrịta gị.
N'aka nke ọzọ anyi nwere a karia ihe zuru ezu ike isi asatọ Mediatek processor na-eme ka Teclast X10 3G Tablet na-arụ ọrụ zuru oke ma nwee ihe karịrị ezigbo nzaghachi na arụmọrụ ma nwee ike ịgba ọsọ ọ bụla ngwa ngwa gam akporo ọ bụla n'agbanyeghị etu o siri dị arọ.
Ihe ọzọ dị mma iji kọwaa Teclast X10 3G, bụ ọkwa ọkwa nke ngwaọrụ ahụ, a larịị na n'adịghị ka ndị ọzọ Mbadamba ụrọ nke ịke na price nso, ebe a ọ na-ada ụda na ụfọdụ ike na-ekwe ka anyị na-enwe ike na-ekiri fim na vidiyo na-enweghị na-amalite iji ekweisi ma ọ bụ mpụga okwu.
N'ikpeazụ, Okwesiri ighota batrị 5800 mAh buru ibu, nke were ụbọchị anọ na-enweghị nsogbu na ọnọdụ ihi ụra, nke m si na ya were obodo kwụụrụ onwe ihe dị ka elekere isii na ọkara awa asaa nke ihuenyo na-aga n'ihu na-egwu vidiyo gụgharia site na Netflix.
Ihe kacha njọ nke Teclast X10 3G
Ọ bụghị ihe niile ga-adị mma na nke a Mbadamba ụrọ X10 3G, ma ọ bụrụ na ọ dị otu n'ime ihe na-ewute m nke ukwuu, ndị a bụ igwefoto ya abụọ. A) Eeh igwefoto azụ nke naanị 2 mpx, na ihu ụkọ 0.2 mpx dị ezigbo mkpofu na ha ga-ejere anyị ozi ntakịrị karịa ịme ogbako vidiyo na-adịghị mma, na ọ bụrụ na nwere oke egwu karịa ekele maka obere 0.2 mpx nke igwefoto n'ihu nke Teclast X10 3G.
Ọ bụ ya mere m ji eche ihe kpatara ntinye igwefoto abụọ kama ahọpụtala ịmekota otu igwefoto n'ihu. Dịka ọmụmaatụ 2 mpx ka etinye ya n'ihu ka ọ dịkarịa ala nwee ike ịnụ ụtọ ogo dị elu ma ọ bụ ezigbo mma na oku vidiyo ma ọ bụ nzukọ vidiyo nke anyị na-eme na Tablet.
Ihe ọzọ m chọpụtara na Teclast X10 3G a na-ata ahụhụ bụ na Android multitasking, na bụ na naanị 1 GB nke ebe nchekwa RAM anyị agaghị enwe ike ịjụ nke ukwuu n'ihe gbasara ịgba ọsọ n'otu oge na ndabere.
Na nkenke, ọ bụrụ na anyị ewepụ nkọwa ndị a na-adịghị mma ebe ha dị, anyị na-eche ihu mbadamba nkume karịa nke ahụ ga-enyere anyị aka were were rụọ ọtụtụ ọrụ nke onye ọrụ gam akporo gam akporo.
Naanị 1 GB nke Ram
Onye edemede: 20%
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mbadamba gam akporo » You nwere ike ịnwe Mbadamba ụrọ gam akporo maka ihe na-erughị 100 euro?. Nyocha Teclast X10 3G
Ndewo, ị maara ma mbadamba a anatawo mmelite site na OTA? na ebee ka ihu mmelite nke ibe keyboard? n'ihi na enweghị m ike ịchọta ha
Evernote ugbu a gụnyere nhọrọ ọhụrụ maka nyocha na dezie akwụkwọ
Swipe maka Facebook na pro pro na ire ere na 50% izu ụka niile